Thi Ha Thu – Featured Collectives
All posts by “Thi Ha Thu”
အိမ်ပြန်ချင်တဲ့ စိတ်ဆန္ဒဟာ ပြီးပြည့်စုံချင်တဲ့၊ မိမိဘယ်မှာရှိသလဲဆိုတာသိချင်တဲ့၊ ကြယ်တွေအားလုံးကိုဖြတ်ပြီး ဆွဲလိုက်တဲ့ မျဉ်းကြောင်းတွေဆုံရာ ဆုံမှတ်ဖြစ်ချင်တဲ့၊ နက္ခတ်တာရာပြုလုပ်သူနဲ့ ချစ်ခြင်းမေတ္တာလို့ခေါ်တဲ့ ကမ္ဘာကြီးရဲ့ ဗဟိုချက်ဖြစ်ချင်တဲ့ စိတ်ဆန္ဒပဲ။ အိပ်စက်ရာကနေ နိုးထဖို့၊ နိုးထနေရာက အနားယူဖို့၊ သားရဲတိရိစ္ဆာန်ကို လိမ္မာအောင် သင်ကြားပေးဖို့၊ စိတ်နှလုံးသား ဆန္ဒရှိရာဖြစ်ဖို့၊ အမှောင်ထုမှာ နားခိုဖို့နဲ့ အလင်းနဲ့အတူ လောင်ကျွမ်းဖို့၊ စကားပြောဖို့မလိုပဲ လုံးဝနားလည်နိုင်ဖို့။ ရေဘက္ကာ ဆိုလ်နစ်၊ နိဗ္ဗာန်ဘုံတံခါးများကို တီးခေါက်ခြင်း – နိုင်ငံရေးအတွက် ရှုမြင်ကွင်းများ Social landscape photography [SLP] မှာ ဖေါ်ပြတာတွေက ကမ္ဘာကြီးပေါ် လူသားတွေပြုလုပ်လိုက်တဲ့ အကျိုးဆက်တွေပဲ၊ လူသားတွေပြုလုပ်လိုက်တဲ့ […]
Street Photography မှာ အပြုသဘောဆောင်တဲ့ ဝေဖန်မှု ဘယ်လိုပေးမလဲ?
Street photography မှာ (ဒါမှမဟုတ် ဘဝရဲ့ ဘယ်အရာတွေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်) ပိုမိုကောင်းမွန်တိုးတက်လာဖို့အတွက် ရိုးသားပြီး အပြုသဘောဆောင်တဲ့ ဝေဖန်မှု ရရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် လက်ရှိအင်တာနက်ပေါ်က ပြဿ နာက ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အာရုံပေးမှုအချိန်ဟာ တိုတောင်းပြီး Facebook/Flickr စတာတွေမှာ မှတ်ချက်ပြန်ပေးတာတွေ အများစုဟာ “ကောင်းလိုက်တဲ့ ရိုက်ချက်”၊ “အလင်းရောင်ကျနေတာကို သဘောကျတယ်” ဒါမှမဟုတ် “ဘာကင်မရာ မှန်ဘီလူး သုံးထားသလဲ” စတဲ့ စာသားတွေပဲဖြစ်နေပါတယ်။ ဒီဆောင်းပါးမှာ အပြုသဘောဆောင်တဲ့ ဝေဖန်မှုဘယ်လိုပေးရမယ်ဆိုတာနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အကြံပေးချက်တွေကို ကြိုးစားဖော်ပြသွားပါမယ်။ အခြားသူများကို အပြုသဘောဆောင်တဲ့ ဝေဖန်မှုပေးတာဟာ သူတို့ကို […]
ဂ) Street Photography မှာ မတူညီတဲ့ ကင်မရာ၊ မှန်ဘီလူး၊ နည်းလမ်းများ အသုံးပြုခြင်း ၁။ မတူညီတဲ့ ချဉ်းကပ်နည်းများကို စမ်းသပ်ခြင်း Street Photographer တစ်ယောက်အနေနဲ့ တီထွင်ဖန်တီးနိုင်မှုကို ထိမ်းသိမ်းထားနိုင်ဖို့ နည်းလမ်းတစ်ခုကတော့ အမြဲမပြတ် စမ်းသပ်ကြီံဆနေဖို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ၁၉၂၀ ခုနှစ်များက ဓာတ်ပုံသမား Andre Kertesz ဟာဆိုရင် ချဉ်းကပ်ပုံ ချဉ်းကပ်နည်းများကို စမ်းသပ်ရုံမက ကင်မရာ မှန်ဘီလူးများကိုလည်း စမ်းသပ်အသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။ အမျိုးမျိုးသော မှန်ဘီလူးတွေနဲ့ စမ်းသပ်ခဲ့တာဟာ အဲ့ဒီအချိန်ကာလက ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ တရားဝင်ပြဿနာတွေကြောင့်လို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။ ၁၉၂၇ခုနှစ်မှာ Montmartre က အများသုံးလှေကာကို […]
#LeadingLines Yangon, Myanmar. 2017 © Thi Ha Thu
#LeadingLinesYangon, Myanmar. 2017© Thi Ha Thu
#NoHuman Singapore. 2017 © Thi Ha Thu